Ny andraikitry ny haino aman-jery nomerika amin'ny marketing | Martech Zone
Ny andraikitry ny haino aman-jery nomerika amin'ny marketing
Sabotsy, Desambra 28, 2013 Alatsinainy Desambra 30, 2013 Douglas Karr
Rehefa mifindra amin'ny nomerika ny dokam-barotra, ireo mpivarotra dia miasa mba hikajiana ny fizarana faratampony amin'ny tetibola momba ny varotra. Tsy ny hahatratra ny tanjon'izy ireo fotsiny, fa ny fanararaotana koa ny tombotsoan'ny media tsirairay mba hahatanteraka ny fampiasam-bola amin'ny marketing. Ity infographic ity dia maneho ny singa fototra angon-drakitra ary koa ny dingana ampiasain'ny mpivarotra hahazoana izany marina.
Ny haino aman-jery nomerika dia lasa ankafizin'ny mpivarotra. Amin'ny taona 2017, tombanana ho 171 miliara dolara ny dokambarotra dizitaly, mahatratra ampahefatry ny vola lany amin'ny fanaovana doka manerantany. Mampiseho fiakarana 70% izany raha oharina amin'ny ambaratonga ankehitriny. Any Etazonia, ny fandaniana doka amin'ny Internet dia nahatratra ny haino aman-jery rehetra afa-tsy ny fahitalavitra tamin'ny 2011.
Capgemini Consulting dia namoaka ebook misy valiny feno, Andraikitry ny nomerika amin'ny fampifangaroan'ny media: Fahatakarana ny varotra dizitaly ary ahatongavany tsara.
Tags: capgeminicapgemini consultingHafanàm-po an-barotrafifangaroan'ny marketing nomerikaHafanàm-po an haino aman-jeryafangaro amin'ny haino aman-jeryvarotra nentim-paharazanahaino aman-jery nentim-paharazana
Fitaovana fivarotana votoaty 25 mahatalanjona
Twitter: Autofollow miorina amin'ny Toerana